Instagram horeyba waxay ugu qarinaysaa waxyaabaha ay jecel yihiin daabacadaha la soo rogay | Androidsis
Instagram wuxuu bilaabaa inuu qariyo waxyaabaha uu jecelyahay ee daabacaadaha
Instagram muddo ayey ka shaqeyneysay isbadalo badan oo ku saabsan barnaamijka. Abka caanka ah ayaa horay u soo muuqday heesta heesta sheekooyinkooda, sidii loo soo bandhigay dhowr bilood ka hor. Marka lagu daro ka shaqeynta isbeddelada mustaqbalka. Mid ka mid ah isbeddeladan, oo lagu dhawaaqay dhowr bilood ka hor, hadda waa run. Waxay bilaabaan inay qariyaan tirada jecel ee daabacaadaha.
Instagram mar hore ayay faallo ka bixisay waqti hore waxay doonayeen inay diirada saaraan tayada waxa ku jira kor u kaca. Marka tirada waxyaabaha jecel sida sawirka ama aragtida fiidiyowga waa inaysan muhiim ahayn. Sababtaas awgeed, waxay mar horeba isku dayayaan inay ku qariyaan dalal dhowr ah.
Tiro kooban oo isticmaaleyaal ah oo ku nool waddamada sida Australia, Talyaaniga ama Kanada way arki karaan isbadalkan hada. Markii aan u tagno daabacaad ku jirta, tirada waxyaabaha uu jecel yahay sawirkani lama arko. Instagram durba waa tijaabineysaa waxaana la qorsheeyay in la balaariyo shaqadan toddobaadyada soo socda suuqyo badan.
Kaliya qofka soo geliyay sawirkaas shabakada bulshada ayaa sii wadi doonta inay aragto intaan jecel. Markaa ma noqon doonto mid caam ah, laakiin qofkaasi wuu sii wadi karaa inuu helo macluumaadkan. Waa macluumaad muhiim u noqon kara xaalado badan, sida shirkadaha, si loo ogaado haddii sawirku leeyahay aqbalaad wanaagsan oo ka dhexeysa kuwa raacsan.
Isbedelka waxaa lagu dhawaaqay dhowr bilood ka hor by Instagram lafteeda. Isticmaalayaal badan ayaan si buuxda u qancin, laakiin tani uma muuqato inay shirkadda ka joojinayso hawlgalkeeda. Dhowr waddan ayaa hadda adeegsan kara, halka la filayo in xagaaga oo dhan uu gaari doono suuqyo kale.
Shaki la'aan, waa isbedel aan caadi aheyn oo loogu talagalay barxad sida Instagram ah, halka kuwa wax saameeya, caan noqoshada iyo helitaanka waxyaalo badan oo jecel ama kuwa raacsan intii suurtogal ah ay u muuqato lagama maarmaan. Laakiin waa la arki doonaa haddii isbeddelkan jihada ah uu maareeyo inuu ilaaliyo caannimadiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Instagram wuxuu bilaabaa inuu qariyo waxyaabaha uu jecelyahay ee daabacaadaha
Honor 9X iyo 9X Pro ayaa ku qoran TENAA; Mate 30 Lite sidoo kale